49 Zvanzi naJehovha pamusoro pevanakomana vaAmoni:+ “Israeri haana vanakomana, kana kuti haana mugari wenhaka here? Nei Marikamu+ aita kuti nyika yaGadhi ive yake,+ uye vanhu vake vagara mumaguta aIsraeri?”+ 2 “‘Naizvozvo, tarirai! mazuva achauya,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘andichaita kuti chiratidzo chokunyevera hondo+ chinzwiwe neRabha+ revanakomana vaAmoni; uye richava murwi wematongo,+ uye mataundi ari pasi paro+ achapiswa nomoto.’+ “‘Israeri achagara nhaka vaya vakamugara nhaka,’+ Jehovha adaro. 3 “‘Ungudza,+ haiwa iwe Heshbhoni,+ nokuti Ai rapambwa! Shevedzerai, haiwa imi maguta ari pasi peRabha. Sungirai masaga.+ Ungudzai, uye pota-potai nematanga akavakwa nematombo, nokuti Marikamu achatapwa+ pamwe chete nevapristi vake nemachinda ake.+ 4 Unozvikudzirei pamusoro pemapani, pamusoro pebani rako rinoyerera,+ haiwa iwe mwanasikana asina kutendeka, iwe uri kuvimba nepfuma yako,+ uchiti: “Ndiani achandivinga?”’”+ 5 “Zvanzi naChangamire+ Ishe, Jehovha wemauto, ‘Tarira ndichakuunzira chinhu chinotyisa,+ chichibva kune vaya vose vakakupoteredza. Muchaparadzirwa, mumwe nomumwe akananga kwake,+ uye hapazovi nomunhu anounganidza vaya vanenge vachitiza.’” 6 “‘Asi pashure paizvozvo ndichaunganidza nhapwa dzevanakomana vaAmoni,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.” 7 Zvanzi naJehovha wemauto pamusoro peEdhomu: “MuTemani+ hamusisina kana uchenjeri+ here? Mazano aparara here kune vaya vanonzwisisa? Uchenjeri hwavo hwaora here?+ 8 Tizai!+ Tsaukai! Endai pakatikati mugare ipapo,+ haiwa imi vagari vomuDhedhani!+ Nokuti ndichaunza njodzi yaIsau paari, nguva yandichafunga nezvake.+ 9 Kana vanotanha mazambiringa vakapinda mauri, havangasiyi mamwe anosaririra here? Kudai mbavha dzaizouya usiku, dzaizongoparadza zvadzaida chete.+ 10 Asi ini, ndichasiya Isau pachena.+ Ndichaita kuti nzvimbo dzake dzaanovanda dzive pachena,+ uye haazokwanisi kuvanda.+ Vana vake nehama dzake nevavakidzani vake vachapambwa,+ asi iye haazovipo.+ 11 Siya nherera dzako.+ Ini ndichadzichengetedza dziri mhenyu, uye chirikadzi dzako dzichavimba neni.”+ 12 Nokuti zvanzi naJehovha: “Tarira! Kunyange vasingawanzonwiri mukapu yacho, vachatonwa chete.+ Iwewe, hauzorangwi zvachose here? Hauzoregi kurangwa, nokuti uchatonwa chete.”+ 13 Zvanzi naJehovha, “Nokuti ndapika neni pachangu+ kuti Bhozra+ richava chinhu chinokatyamadza,+ chinhu chinozvidzwa, chinhu chakaparadzwa uye chinhu chinotukwa; uye maguta aro ose achava matongo nokusingagumi.”+ 14 Pane mashoko andakanzwa kuna Jehovha, uye pane nhume yakatumwa pakati pemamwe marudzi, ichiti: “Unganai, muuye, murirwise, musimuke kuti murwe.”+ 15 “Nokuti, tarira! ndakakuita muduku pakati pemarudzi, munhu anozvidzwa pakati pevanhu.+ 16 Kudederesa kwawakaita, iko kuzvikudza kwomwoyo wako kwakunyengera,+ haiwa iwe uri kugara munzvimbo dzakachengeteka dzeibwe, uchidzora pamusoro pechikomo. Kunyange kana ukavaka dendere rako pakakwirira sezvinoita gondo,+ ndichakuburutsa ipapo,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 17 “Edhomu ichava chinhu chinokatyamadza.+ Munhu wose anenge achipfuura nomairi acharamba akatarira achikatyamara, oridza muridzo nokuda kwematambudziko ayo ose.+ 18 Hapana munhu achagara imomo uye hapana mwanakomana wevanhu achagara mairi ari mutorwa,”+ ndizvo zvataura Jehovha, “sezvazvakanga zvakaita pakaparadzwa Sodhoma neGomora nemataundi aiva pedyo naro.+ 19 “Tarira! Mumwe munhu achauya sezvinoita shumba+ achibva mumatenhere makuru ari pedyo naJodhani+ achienda kunzvimbo yokugara yakasimba, asi ndichamuita kuti atize nenguva pfupi achibva mairi.+ Ndichagadza uya akasarudzwa kuti aitarisire. Nokuti ndiani akaita seni,+ ndiani achandidenha,+ uye iko zvino, ndiani mufudzi angamira pamberi pangu?+ 20 Haiwa imi vanhu, chinzwai zvakarongwa naJehovha zvaakarongera Edhomu,+ uye pfungwa dzake dzaakafungira vagari vomuTemani:+ Chokwadi vana vemakwai vachazvuzvurudzwa. Chokwadi iye achaita kuti nzvimbo yavo yavanogara ive dongo nokuda kwavo.+ 21 Kutinhira kunokonzerwa nokuwa kwavo pakunonzwika, nyika ichazununguka.+ Pachava nokushevedzera!+ Kushevedzera kwacho kuchanzwikawo kuGungwa Dzvuku.+ 22 Tarira! Mumwe munhu achakwira obvuta sezvinoita gondo,+ achatambanudza mapapiro ake paBhozra;+ uye muzuva iroro mwoyo yevarume veEdhomu vane simba ichaita somwoyo womudzimai ari kutambudzika nokusununguka.”+ 23 Pamusoro peDhamasiko:+ “Hamati+ neApadhi+ zvanyara, nokuti zvanzwa mashoko akaipa. Zvaparara.+ Mugungwa mune kuzvidya mwoyo; harisi kukwanisa kuramba rakagadzikana.+ 24 Dhamasiko harisisina ushingi. Ratendeuka kuti ritize, uye ravhunduka kwazvo.+ Rabatwa nokutambudzika nemarwadzo okusununguka, somukadzi ari kusununguka.+ 25 Nei guta rairumbidzwa risina kusiyiwa, iro taundi rokupembera nomufaro?+ 26 “Naizvozvo majaya aro achawira munzvimbo dzaro dzinoungana vanhu, uye varume vose vehondo vachaitwa kuti vanyarare muzuva iroro,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto. 27 “Ndichatungidza moto parusvingo rweDhamasiko, uye uchaparadza shongwe dzokugara dzaBheni-hadhadhi.”+ 28 Zvanzi naJehovha pamusoro peKedhari+ noumambo hweHazori,+ hwakarwiswa naNebhukadrezari mambo weBhabhironi:+ “Haiwa imi varume, simukai, endai kuKedhari mupambe vanakomana vokuMabvazuva.+ 29 Matende+ avo nemapoka+ avo ezvipfuwo zvichatorwa, machira avo ematende+ nezvinhu zvavo zvose. Vachatorerwa ngamera+ dzavo. Vachashevedzera kwavari kuti, ‘Zvinhu zvinotyisa zviri kumativi ose!’”+ 30 “Tizai, tizirai kure; endai pakatikati kuti mugare ipapo, haiwa imi vagari vomuHazori,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Nokuti Nebhukadrezari mambo weBhabhironi+ afunga zano rokuti arwisane nemi uye akufungirai imwe pfungwa.” 31 “Haiwa imi varume, simukai, endai munorwisa rudzi rwakagara zvakanaka,+ ruri kugara rwakachengeteka!”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Haruna masuo uye haruna muzariro. Ivo vanogara vari voga.+ 32 Ngamera dzavo+ dzichatorwa nechisimba, uye zvipfuwo zvavo zvizhinji zvichapambwa. Vaya vakadimburira bvudzi ravo pazvavovo,+ ndichavaparadzira kumhepo yose;+ uye ndichaunza njodzi yavo ichibva munzvimbo dzose dziri pedyo narwo,” ndizvo zvinotaura Jehovha. 33 “Hazori+ ichava nzvimbo inogara hunguhwe,+ ichava dongo nokusingagumi. Hapana munhu achagara imomo, uye hapana mwanakomana wevanhu achagara imomo ari mutorwa.”+ 34 Iri ndiro shoko raJehovha rakauya kumuprofita Jeremiya pamusoro peEramu+ pakutanga kwoumambo hwaZedhekiya+ mambo waJudha, richiti: 35 “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Tarira ndichatyora uta hweEramu,+ kutanga kwokuva nesimba kwavo. 36 Ndichaunza mhepo ina pamusoro peEramu dzichibva kumigumo mina yematenga.+ Ndichavaparadzira kumhepo dzose idzi,+ uye hapazovi norudzi rusingazosvikwi nevakaparadzirwa+ vokuEramu.’” 37 “Ndichaparadza vaEramu pamberi pevavengi vavo uye pamberi pevaya vari kutsvaka mweya yavo; uye ndichavaunzira dambudziko, iko kutsamwa kwangu kukuru,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Ndichatuma bakatwa kuti rivatevere kusvikira ndavaparadza.”+ 38 “Ndichaisa chigaro changu choumambo muEramu,+ uye ndichaparadza mambo nemachinda imomo,” ndizvo zvinotaura Jehovha. 39 “Zvino nemazuva okupedzisira+ ndichaunganidza nhapwa dzokuEramu,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha.